Malunga Nathi-Yueqing Jiali Tools Co., Ltd.
I-Yueqing Jiali Tools Co., Ltd. yasekwa ngo-2005 kwaye inabasebenzi abangaphezu kwama-20.
Lishishini elikhethekileyo kwimveliso ye amasuntswana okuvula umngxuma ezahlukeneyo.
Inkampani ibambelela kwi-tenet "yomthengi kuqala, ekhonza abathengi ngentliziyo epheleleyo", kwaye yenze ngokwezifiso indawo yokuvula umngxuma kwiimfuno zabathengi abahlukeneyo. kwaye ufezekise ngokwenene imveliso efunekayo.
Ifumaneka eFurong, eWenzhou, "idolophu yasekhaya yeendawo zokomba" eTshayina. Sinokwenza uthotho lwabavula imingxunya ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi, kwaye sinikeze inkonzo yokumisa enye yoyilo lwesampulu kunye nokuveliswa.
"Ukuphucula umgangatho ngetekhnoloji kunye nokuSebenzisa imarike ngokomgangatho"
Inkampani inobuchwephesha obunamandla, kwaye ibhetshi nganye yeemveliso kufuneka ihlolwe ngaphakathi (uvavanyo olutshabalalisayo) ngaphambi kokuthunyelwa. Inkampani ithe gqolo ukonyusa iinzame zayo zokwandisa imarike, kwaye yaseka inethiwekhi yokuthengisa evakalayo kunye nenkqubo yenkonzo emva kokuthengisa kwizixeko ezikhulu neziphakathi kwilizwe liphela. Kunconywa ngamxhelo mnye ngoosomashishini bangaphandle. Ukuze kuphuculwe ngakumbi umgangatho wemveliso kunye nokhuphiswano lwemarike, phakamisa ulawulo lomgangatho ukuya kwinqanaba elitsha. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani iye yandisa utyalo-mali ngokuqhubekayo kwaye yazisa itekhnoloji.
Inkampani inamandla okusebenza okuqinileyo kwaye inemizila emihlanu yokuvelisa equka iiseti ze-2 ze-hydraulic presses ezinkulu, izixhobo zokulawula amanani, oomatshini bokusika ngokuzenzekelayo, i-welding high-frequency welding, kunye noomatshini bokuqhawula intloko ngokuzenzekelayo. Umthamo we-Scale kunye nezixhobo zezixhobo zifikelele kwinqanaba eliphezulu lasekhaya eliphakathi, libeka iindawo ezintathu eziphezulu kwishishini elifanayo kwindawo yeYueqing ngokumalunga nomthamo wokuvelisa izixhobo. Umgangatho webhetshi nganye yeemveliso kufuneka uhlolwe ngaphakathi (uvavanyo olutshabalalisayo) ngaphambi kokuthunyelwa.
Inkampani ithatha "iSayensi kunye neTekhnoloji yokuQala, Qhubeka uPhucula" njengenjongo yayo yenkampani, ibambelela kumoya we-pragmatic, osebenzayo kunye nokhokelayo weshishini, kwaye uzibophelele kuphando kunye nophuhliso lwabavuleli bemingxuma, ngakumbi abavula imingxuma eludongeni, iintonga zokudibanisa, i-trill drill. amasuntswana, njalo njalo. Lukhetho lokuqala lokuxhasa iimveliso kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumashishini ezixhobo zehardware ezinxulumeneyo.